Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Spanish Saul Niguez Childhood Story Plus Na-emeghe Eziokwu Biography
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kacha mara aha ya; "Niguez". Nwaanyị anyị bụ Nwa Nwa akụkọ Akụkọ na enweghị ike ịkọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge. Nchoputa ahu bu ihe ndi ozo na ndu ya, ndu ndi ozo, akuko nke ozo tutu ama aha, bilite na akuko akuko, nmekorita na ndu onwe ya.
Ee, onye ọ bụla maara ọ bụ otu n'ime etiti kachasị mma nke ogige ntụrụndụ na Europe. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akwụkwọ akụkọ Saul Niguez nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Saul Niguez Childhood Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- Ndụ mbido
Saul Níguez Esclapez mụrụ na 21 November 1994 nne ya, Pilar Esclápez na nna, José Antonio Ñíguez na Elche, Spain. N'okpuru bụ foto nke ezigbo nne na nna Sọl bụ ndị na-anya isi maka ihe nwatakịrị ha mụrụ ikpeazụ.
Ndị nne na nna Saul Níguez- Pilar Esclápez na José Antonio Ñíguez.
Saul Niguez Mmalite:
Ezinụlọ Saul Niguez sitere na obodo Valencian kwụ ọtọ nke Spain. Agbụrụ a na-asụ asụsụ Valencian ma ọ bụ nde mmadụ 4.9 bi na ya bụ agbụrụ nke anọ kachasị n'ọnụ ọgụgụ mgbe Andalusia, Catalonia na Madrid.
Isi mmalite Saul Níguez. Ebe E Si Nweta Asya Pereltsvaig na Instagram.
Saul Niguez Family Eziokwu:
Saul si n'ulo ndi na-egwu egwu, otu ulo nke football na-agba n'ime umu umu nwoke nile. Ị maara?… Nna Saul bụ José Antonio nke dị n'okpuru ebe a na-egwuri egwu dị ka onye na-eti egwu maka ụlọ Elche nke obodo ha ruo ọtụtụ afọ.
Nna Saul Níguez- José Antonio Ñíguez. Ebe E Si Nweta Emporda.
Ọ na-esiri José Antonio ike ịnagide ezumike nká mgbe ọrụ ịgba chaa chaa gafere. Ndị na-enwetatụ elu na nlọta ezumike nká kpebiri ịnọgide na-ebi nrọ ya site n'aka ụmụ ya nwoke. Sọl Niguez na ụmụnne ya abụọ bụ Jonatan na Erọn niile tolitere ghọọ ndị na-agba ụkwụ dịka nna ha.
Saulmụnna Saul Níguez- Jonathan na Aarón Níguez. Ebe E Si Nweta ABC.
Saul Niguez Childhood Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- Ndụ Ndụ Mmalite
Àgwà mmadụ nke ịbụ nwatakịrị nwoke mere ka Saul Niguez bụrụ nwa na-achọsi ike na nke na-asọmpi na ezinụlọ. N'etiti ụmụnne ya, ọ bụ ya bụ onye nwere mmụọ mgbagwoju anya.
Nighụnanya Saul Niguez nwere maka bọl hụrụ ka nna ya debanyere aha ya na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ nke ụlọ Elche CF nke obodo ha nke nyere ya ohere iji gosipụta talent ya. Saul Niguez nwere mmetụta ozugbo na Elche nke hụrụ ya ka ọ na-ebili ngwa ngwa karịa ndị ọgbọ ya ka ọ bụrụ onye isi ndị otu ya.
Saul Níguez Ndụ Ndụ Ndụ. Ebe E Si Nweta Instagram
Saul Niguez mere otutu ihe n'umu ihe omumu nke huru ya ka o na-ese n'etiti ndi ogbo ya. E nwere oge ọ ga-atụle ụbọchị ọmụmụ ụbọchị ọmụmụ. Ma n'akụkụ ihu, obi dị ya ụtọ ime ihe ọ hụrụ n'anya. Ịbụ onye kasị mma n'etiti ndị ọgbọ ya mere ya isiokwu nke anya maka Real Madrid agụmakwụkwọ onye nwetara ya na 2006 afọ.
Saul Niguez Childhood Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- Ụzọ Ebube
Saul ama enen̄ede odu ke ini enye okodude ke Real Madrid Academy:
Saul Niguez ghọrọ onye na-eto eto na-eto eto nke Real Madrid mgbe ọ na-ejide ya n'oge ọ bụ 11 n'afọ 2006. Sọl enweghị oge kachasị mma na ụlọ akwụkwọ ahụ n'agbanyeghị na ọ bụ a na-elekọta ya nke ọma.
Dabere na Sportskeedia, Saul Niguez kwuru na ya bu okwu banyere mmegbu na mmekorita nke ndi amaghi ya. Na N'ajụjụ ọnụ 'El Mundo'Ọ sịrị,
"N'afọ ahụ na Madrid, m mụtara ọtụtụ ihe, enwere m ọganihu dị ukwuu. Ọ bụkwa oge siri ike maka mụ onwe m n'ihi na ọtụtụ ihe ndị na-abụghị ihe egwuregwu na-eme. "
Saul kwuru na ndị na-amaghị ama na-apụnara akpụkpọ ụkwụ m, nri ma kwụsị ya ịga ọzụzụ maka izu abụọ. Ndị ajọ omume a mekwara ka ọ dị elu site n'itinye akwụkwọ ozi ya n'aka onye na-eto eto na-eto eto nke kwuru na ọ dere ya.
O ruru obere oge na Sọl enweghị ike ịtachi asọmpi ndị a. Mgbe ya na ndị enyi ya na ndị ezinụlọ ya kwurịtara okwu, o kpebiri na ya ga-ahapụ ụlọ ọgbakọ ahụ. Nke a bụ n'afọ 2008.
Saul Niguez Childhood Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- Bilie na-ewu ewu
Banye na ndị agbata obi Real Madrid Athletico Madrid bụ mkpebi amamihe dị na ya nke nyere etu Sọl si mepee ruo ụbọchị. Mgbe agụmakwụkwọ ndị ntorobịa nke Atlético Madrid, Sọl nwetara ọgwụgwọ kacha mma. Ọ gara n'ihu na-egosi ihe karịrị asọmpi asọmpi 200 maka otu ndị ntorobịa nke klọb ma zere ebe mara mma nke Manchester United na Arsenal.
Dị ka n'oge ederede, Saul Niguez etinyewo aha ya na egwuregwu nke egwuregwu Madrid na-asọ asọ na Madrid.
Saul Niguez Childhood Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- Ndụ mmekọrịta
N'azụ onye egwuregwu bọọlụ na-aga nke ọma, enwere ezigbo enyi nwanyị nọ na Yaiza onye, ​​ọ bụrụ na ọ bụghị ihie ụzọ, nwanne nwanyị Celine Dion
Saul Níguez na Yaya. Ebe E Si Nweta Diario AS.
Ikpe ikpe site na foto dị n'elu, ị ga-ekwenye n'eziokwu ahụ bụ na ịbụ onye ọkpụkpọ mara mma kwesịrị ka ọ bụrụ egwuregwu mara mma.
Yaiza bụ onye mara mma nke na-eme ka obi sie ya ike na ọnyà ọ bụla. Ọ bụ onye na-adịghị achọ ọdịmma onwe ya nanị nke na-eme ihe ọ bụla karịa inye nkwado nwoke maka enyemaka ya ọbụlagodi na ị pụtara itinye ndụ ya aka.
Eziokwu ahụ bụ na ma ndị hụrụ ya n'anya na-enwe mmekọrịta oge na-adịghị anya, agbanyeghị obi abụọ na agbamakwụkwọ maka nwere ike ịbụ ọkwa ọzọ.
Saul Niguez Childhood Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- Ndụ nke Onye
Ịmata Sọl Niguez ndụ gị ga-enyere gị aka ịchọta ya n'ụzọ zuru ezu. Malite na ya, ọ bụ onye na-eji ihe atọ akpọrọ ihe ná ndụ ya. Ha bụ; ezinụlọ ya, enyi nwanyị na nkịta, otu n'ime ha na-ese onyinyo.
Ndị na-egwu bọl, dịka ndị ọzọ, hụrụ anụ ụlọ ha n'anya na Saul Nuguez abụghị otu. Ọbụna ị nwere nkwupụta na ọ dịghị iguzosi ike n'ihe fọdụrụ na egwuregwu nke oge a, nke a n'ezie anaghị echebara njikọ siri ike nke Yaiza, Saul, na nkịta ya.
Ị maara?… Mgbe Saul Nuguez nwunye Yaiza anaghị arụsi ọrụ ike na-ekele nwoke ya, ọ na-etinye oge ka ukwuu na-elekọta nkịta ha bụ ndị aha ha bụ; Boris na Thaila.
Saul Niguez Childhood Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- Ndụ Ezinụlọ
Banyere ndị nne na nna Saul Niguez:
Sọl sitere na ndị ezinụlọ dị umeala n'obi, ndị otu n'ime ha na-ahụ ihe dị mkpa n'ọrụ nlekọta bọl ha na ihe ọ bụla ọzọ. Ha abụọ Pilar Esclápez na José Antonio Ñíguez ugbu a na-ebi ndụ obi ụtọ, na-aga nke ọma n'ihi ekele ha nwere gna ndị kasị mma n'ime ụmụ ha. Oge ọmụmụ ụbọchị na-akọwa oge kachasị ememe na ezinụlọ.
Ndị nne na nna Saul Níguez - Mama, Pilar Esclápez na nna, José Antonio Ñíguez.
Banyere Saul Niguez Ụmụnne:
Saulmụnne Saul Níguez - Jonathan (Aka ekpe) na Aaron (Middle). Ebe E Si Nweta Instagram
Nwoke ahụ n'etiti, Erọn bụ onye nke abụọ nke Sọl. Ọ dị afọ isii karịa Sọl. A zụlitere Aaron site na usoro agụmakwụkwọ ntorobịa nke Valencian. Dị ka n'oge ederede, ọ na-egwuri egwu dị ka winger maka ụlọ ọrụ Malaysian Johor Darul Ta'zim FC
Jonathan bụ ọkpara nke ụmụnne Niguez. Ọ bụ afọ 9 karịa Sọl. Dị nnọọ ka Aaron, a zụlitere ya na usoro ntorobịa Valencia. Jonathan na-arụ ọrụ ugbu a dị ka midfielder maka Elche.
Saul Niguez Childhood Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- LifeStyle
N'ime oge niile anyị na-eleba anya n'akụkọ ihe mere eme ya, anyị chọpụtara na Sọl abụghị ụdị ndị na-agba ọsọ ndụ na-ebi ndụ Lavish Web site na obere ụgbọala mara mma, booze, swagger, ụmụ agbọghọ, nnukwu ụlọ. Naanị ya na-ahọrọ ka ọ na-enwu gbaa n'èzí football.
Saul Niguez Childhood Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ Eziokwu- Eziokwu efu
Ozugbo Egwuregwu Egwuregwu Tupu E Nwee Ahụ Ike Ya:
Ị maara?… Saul Niguez na-eji ọnwa anọ na mgbu na ahụ erughị ala, ịmịnye ọbara. Nke a bụ oge a na - achọpụta na enwere ọrịa akụrụ. Ọbụna na nke ahụ, ihe niile Sọl chọrọ ime bụ iji bọlbụ.
Saul Níguez Akụrụ Nsogbu- Akụkọ Na-adịghị Agbanwe. Ebe E Si Nweta DreamTeam na WebMD.
Dabere na TheGuardian, o weere aka nke onye na-akwado Athletico Madrid na-edozi ọnọdụ ahụ. El Mono Burgos, bụ onye na-elekọta mgbakọ Athletico Madrid na-ele Sọl anya ma nye ya ndụmọdụ.
"Mgbe ahụ, ahụrụ m," Kwuru Saúl.
Foto nke German El Mono Burgos. Ebe E Si Nweta Eche
Maka Saul, na-ege German El Mono Burgos ntị dị ka ọ na-agwa ya okwu site na ahụmahụ dị ka a chọpụtara na ya onwe ya nwere ọrịa cancer na 2003. N'oge ahụ, ndị dọkịta gwara ya ka ọ chere ruo mgbe Monday ga-ewepụ ọrịa ahụ. Mono jụrụ ma kwusi ike na ọ ga-arụ ọrụ ozugbo.
Iguzosi ike n'ihe nye Diego Simeone:
Saul Níguez Eziokwu Eziokwu- Iguzosi ike n'ihe nye Diego Simeone. Ebe E Si Nweta SportsKeeda.
Saul Niguez kwuru na nso nso a n'ajụjụ ọnụ na ọ chọrọ ịnọ na Atletico maka ndụ. Ihe buru ibu nke biara n'ihi nkwanye ùgwù ya Diego Simeone.
Ihe Mgbaru Ọsọ Ya Niile:
Ebe E Si Nweta Atleti Studio, Sọl egosipụtawo obi abụọ na-akpọ ya "etiti ogige" onye na-atụghị egwu ịgbanye site n'ebe dị anya.
Ebe E Si Nweta Bọl na iri na otu, Sọl egosiwo ogologo oge ịbụ ezigbo nna-ukwu “Ọdịdị Barcelona”Dị ka a hụrụ na ihe mgbaru ọsọ ya n'okpuru. Nke a na-akọwa ihe kpatara FC Barcelona dị ka n'oge edere ederede ịwakpo ya nde 110.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ anyị bụ Saul Niguez Childhood Story tinyere nke na-emeghị ka ọ bụrụ eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kekọrịta anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.